Okunye > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ukuzivocavoca ushukela kanye nemidlalo
Ngingakwazi ukwenza ezemidlalo nesifo sikashukela? Ukuthi isifo sikashukela nemidlalo ziyahambisana yini kuyindaba ezithinta iziguli eziningi zikashukela. Ukuzivocavoca okwanele, kanye nokudla, kuyizingxenye ezibalulekile zokwelapha ushukela. ...
Kungani wehlise isisindo sikashukela: izimbangela
Kungani abantu behlisa isisindo sikashukela, izimbangela nezindlela zokwelashwa I-Diabetes mellitus yisifo esitholakala noma esizuzwe njenge-metabolic, esibonakaliswa ngokwanda koshukela wegazi, okuvela ngenxa yokuntuleka kwe-insulin emzimbeni. ...
IVodka yesifo sikashukela sohlobo 2, kungenzeka ukuthi abanesifo sikashukela baphuze i-vodka
IVodka yesifo sikashukela sohlobo 2: kungenzeka noma cha isifo sikashukela siyinhlekelele yangempela emphakathini wanamuhla. Lapho kukhona isifo esinjalo, isiguli kufanele siguqule kakhulu futhi siguqule indlela yaso ejwayelekile yokuphila. ...
UStevia imbiza yesifo sikashukela
Ukwakheka nenani lokudla okunomsoco Imininingwane ebaluleke kakhulu yeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 inani lama-carbohydrate nama-kilocalories ngamagremu ayikhulu esitshalo. ...
Yini ushukela wegazi olinganiselwa ku: amayunithi nokuqokwa emazweni ahlukahlukene
Amayunithi ahlukahlukene kashukela wegazi.Izinga likashukela wegazi liyinkomba ephambili yelabhoratri, ejwayelwa ukubhekwa yibo bonke abantu abanesifo sikashukela. Kodwa ngisho nakubantu abaphilile, odokotela batusa ukuthatha lolu vivinyo okungenani kanye ngonyaka. ...
Ukumelana nomzimba ne-insulin
Ukumelana ne-insulin - ukuthi kuyini Kodwa kwesinye isikhathi umuntu angaba nokuqalwa kwe-insulin, okuthinta cishe ingxenye yesithathu yabantu. ...
I-Psychosomatics yesifo sikashukela ezinganeni nakubantu abadala
I-Psychosomatics yesifo sikashukela ezinganeni nakubantu abadala Isifo sikashukela kubantu abadala sisabalele impela - cishe i-4,5% yabantu abasemhlabeni banalesi sifo. ...
Umphumela wokuphuza utshwala kushukela wegazi - ukwanda noma ukwehla kwezinkomba?
Amanye amathiphu ngokuphuza utshwala sikashukela Kubantu abanoshukela wegazi ophezulu, kubalulekile ukuba uqaphele lapho uphuza utshwala. ...
Ukuzivocavoca kwezinyawo zikashukela
Ukuvimbela i-hypoglycemia ngesikhathi sokuqeqeshwa ngokomzimba Indlela ephumelela kunazo zonke yokuvikela i-hypoglycemia ukulawula amazinga eglucose ngaphambi nangemuva kokuzivocavoca izikhathi eziningana. ...
Ngabe bayangenisa - ibutho elinesifo sikashukela?
Ngingajoyina ibutho lesifo sikashukela? Umsebenzi wezempi ngaso sonke isikhathi wawubhekwa njengokuthile okuncomekayo futhi okhethekile. Abaphathi abazame ukugwema ukuya empini babethathwa njengamagwala futhi bengakufanele ukubizwa ngokuthi ngamadoda angempela. ...
Isifo esingajwayelekile - i-insipidus yesifo sikashukela ezinjeni: indlela yokuthola nokwelapha i-pathology
Izimpawu zesifo sikashukela i-insipidus yezinja zesifo sikashukela ezinjeni zenzeka nganoma yiluphi uhlobo lesion ye-hypothalamic (ukulimala ekhanda, isimila, umqubuko, ukuphazamiseka kokuthuthuka). ...
Ushukela wegazi Ngemuva kwesidlo
Ukujwayelekile ushukela wegazi ngemuva kokudla Ukwanda okulinganiselayo kweglucose yegazi, amahora angama-1-2 ngemuva kokudla, kuyinto yemvelo yomzimba. Imvamisa yoshukela ngemuva kokudla kumuntu onempilo ayidluli ngo-8.9 mmol / L. ...
Isifo sikashukela ezinjeni: izimbangela, ukwelashwa, ukuvimbela
Isifo sikashukela ezinjeni - Cishe abantu abayizigidi eziyi-10 abanesifo sikashukela bahlala eRussia. Lesi sifo asidlulisanga abafowethu abancane - izinja, ngoba nabo bahlushwa yilesi sifo (ngendlela, amakati nawo anesifo sikashukela). ...
Ngabe yini ushukela wegazi?
Yini ushukela wegazi ngokweminyaka: Ithebula lenkomba Uyini ushukela wegazi ngeminyaka? Ngabe izinkomba ziyehluka ngokuya ngobulili, isimo esijwayelekile, izifo ezifanayo? Yisiphi isikhathi sosuku okuyiyona idatha eyiqonde kunazo zonke. ...
Izimpawu nokwelashwa konyawo lwesifo sikashukela, ukunakekelwa kwezinyawo sikashukela
Ungayelapha kanjani imilenze ngesifo sikashukela i-mellitus Diabetes ibizwa ngokuthi isifo esinamandla sohlelo lwe-endocrine, esibonakala ngoshukela wegazi ophakeme kanye nokuphazamiseka kwe-metabolic. ...
Ingabe uju luphakamisa ushukela wegazi
Imininingwane yokunakekelwa kwempilo Njengoba lokhu kungumthombo woshukela, uju kungenzeka luphakamise amazinga kashukela egazini. Lokhu kungaba kuhle ngesikhathi sesimo esiphuthumayo lapho ushukela wegazi uphansi ngokweqile futhi udinga ukubuyisa. ...
Umehluko phakathi kwe-insulin ne-glucagon
I-Glucagon ne-insulin: imisebenzi nobudlelwano bama-hormone I-Glucagon ne-insulin kungama-pancreas. Umsebenzi wawo wonke ama-hormone umthetho wokusebenzisa umzimba emzimbeni. ...
Ungakhulisa kanjani ukukhiqizwa kwe-insulin emzimbeni ngamakhambi abantu?
Ungalinyusa kanjani izinga le-insulin egazini Ungalinyusa kanjani i-insulin (noma kunalokho, izinga lalo), elikhiqizwa yi-pancreas emzimbeni womuntu? ...
Izimbangela eziphambili zesifo sikashukela i-mellitus Diabetes yi-metabolic disorder, ephelezelwa ukuncipha kokuqhamuka kwethisisi ukungena kwe-insulin noma ukwehla ekukhiqizweni kwayo ngumzimba. ...
Ukubhema noshukela, imbangela yengozi
Ukubhema nesifo sikashukela - kuyingozi kangakanani Ukubhema kuyinkinga ethinta abantu abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyi-1,3 emhlabeni jikelele. Abaningi babo bangoshukela abanikwe amandla okuyeka lo mulu. ...